7 july အရေးတော်ပုံ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
History »7july အရေးတော်ပုံ	17
7 july အရေးတော်ပုံ
Posted by အမုန်း လုလင် on Jul 6, 2012 in History | 17 comments
(ဓါတ်ပုံ .. ko Htoo facebook)
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခေါင်းဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီအမည်ခံသည့် အာဏာသိမ်းမှုကို မတ်လ (၄) ရက်တွင် တကသ ၊ ရကသ ၊ဗကသ တို့က ကန့်ကွက်ကြောင်း ပူးတွဲကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မတ်လ (၆) ရက်နေ့တွင် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ကိုခင်မောင်အုန်းက တော်လှန်ရေးကောင်စီကို ထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က အမှုဆောင် အစည်းအဝေးခေါ်ယူ၍ ဥက္ကဌ ကိုခင်မောင်အုန်းကို ထုတ်ပယ်ကာ ဒု-ဥက္ကဌ ကိုသက်ကို ဥက္ကဌ တင်မြောက်လိုက်ကြသည်။ ထို့နောက် တော်လှန်ရေးကောင်စီကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ မေလ(၉) ရက်နေ့တွင် ဒတ်ခ်ျ သံရုံး ဆန္ဒပြမှုကြောင့် တပ်ဦးမှ ကိုမြသန်း၊ ကိုသက်၊ ကိုသာဘန်း၊ ကိုဇော်ဝင်း တို့ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ ဥပဒေအမှတ် (၃) နှင့် (၄) ကို ထုတ်ပြန်၍ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထို ဥပဒေ (၃) နှင့် (၄) တွင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး မှလွဲ၍ အားလုံး အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မေလ (၁၀) တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း က တက္ကသိုလ်ကောင်စီဝင်များကို ဒဂုံရိပ်သာသို့ခေါ်၍ (၁) ဆရာများ အကျင့် ပျက်သည်။ (၂) ကျောင်းသားများကြား နိုင်ငံရေး ပယောဂများဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်၊ တက္ကသိုလ် ဌာန အသီးသီး မှ ပါမောက္ခများ နှင့် ကျောင်းသား
သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် အချို့ပါဝင်သော တက္ကသိုလ် အမှုဆောင်ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ရပ်အား တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေးအား တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ ထပ်မံ အာဏာသိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သမဂ္ဂမှ အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ မေလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ် နှင့် ဥပစာ ကောလိပ်မှ ဥပစာ သိပ္ပံ (ခ) တန်းအောင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ တွင် အနည်းဆုံး ရမှတ် (၅၀) ရှိ၍ ဖြေဆိုသော ဘာသာရပ်အားလုံး၏ ပျမ်းမျှ အမှတ်သည် (၅၀%) ရမှုသာ ဆေးသိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ၊ သစ်တောရေး မဟာဌာန တို့ ၌ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်နေဝင်းက ကြေညာခဲ့သည်။ ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သော အခါတွင်လည်း အဆောင် စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ဖို့ တက္ကသိုလ်ကောင်စီအား အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသာလှက လက်မခံ၍ မေလ (၁၁)မှာပင် တောလှန်ရေးကောင်စီမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသာလှကို နုတ်ထွက် စေခဲ့သည်။ မြန်မာစာပါမောက္ခ ဦးအေးမောင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ဦးဝန်(မင်းသုဝဏ်)ဌာန ပြောင်းခဲ့သည်။ မေလ (၁၂) ရက်နေ့တွင်လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဆောင်မှူး အချို့နှင့် လက်ထောက် အဆောင်မှူး အချို့နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
(ဓါတ်ပုံ ဖေ့ ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာ)
အခင်းဖြစ်ပွားရသည့် အဓိကကြောင်းအရင်း ….
(ပုံ .. ဖေ့ဘွတ်ခ် မှ )
ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အဦး အား မိုင်းဖြင့်ခွဲခြင်း ….
ဤအကြောင်းပြချက်မှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ကုလားဖန်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ သမဂ္ဂအဆောက်အဦးအား ရက္ခိုင်းနှင့် ပစ်ရန် ဗိုလ်နေဝင်းက တော်လှန်ရေးကောင်စီအား အမိန့်ပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ရက္ခိုင်းလက် ဂန်းကျဉ် ရှာမရသောကြောင့် ဒိုင်းနမိုက် နှင့် ကပ်ခွဲရန် ဒိုင်းနမိုက် ရှာကြပြန်သည်။ ညသန်းခေါင်းကျော်တွင် သမဂ္ဂအားဖေါက်ခွဲမည့် ဒိုင်းနမိုက်များအား ထောက်ကြံ့ပင်မ ခဲယမ်း သိုလှောင်ရုံမှ အမြောက်အမြား ရရှိခဲ့သည်။ သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကို စိတ်ကြိုက် ဒိုင်းနမိုက်ပ်ဆင် ဖောက်ခွဲခဲ့သူမှာ အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ ထားဝယ်သား ဗိုလ်မှူး ထွန်းရီ ဖြစ်သည်။ ဖောက်ခွဲရာတွင်လဲ လိုအပ်သော ပမာဏ ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပို၍သုံးခဲ့သည်။ ဒိုင်းနမကိုက်အား ရန်ကုန်မြို့ကဲ့သို့နေရာမျိုးတွင် ဖောက်ခွဲရန် အနည်းဆုံး ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် တစ်ဦး လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ဖောက်ခွဲမှု စာချွန်လွှာ ပေးမှသာ တရားဝင်သည်။ သို့သော် ဗိုလ်နေဝင်း မှ ဗိုလ်ကျော်စိုးဆီသို့ ဖောက်ခွဲဖို့ နုတ်မိန့်ပေးခဲ့သည်။ တဖန် ဗိုလ်ကျော်စိုးမှ ဗိုလ်ထွန်းရီကို နုတ်မိန့်ပေးပြန်သည်။ ထို အခါ ဗိုလ်ထွန်းရီသည် ဒိုင်းနမိုက်များ တပ်ဆင်ပြီးသော်လည်း တရားဝင် အမိန့်ပေးသော စာချွန်လွှာမရှိသည့် အတွက် အခက်တွေ့လျက်ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် တပ်မတော် စစ်မင်းကြီး ဘဦး(ခ) မင်းသိမ်း မှ (မနက်စောစော လမ်းလျှောက်လာရင်း ဗိုလ်ထွန်းရီက လက်မှတ်ထိုးပေးရန် ပြောသဖြင့်) ဖောက်ခွဲမှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ဝင်ထိုးပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါမှ ဗိုလ်ထွန်းရီသည် သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးတွင် အသင့် တပ်ဆင်ထားသော ဒိုင်းနမိုက်များကို ဇူလိုင် (၈) ရက် မနက် (၃) နာရီခွဲ (၄) နာရီ ခန့်တွင် ဖောက်ခွဲလိုက်လေသည်။
မှတ်ချက် ။။ ။။
By .. M.O.Encyclopedia ။
အမုန်း လုလင် has written 18 post in this blog.
View all posts by အမုန်း လုလင် →	Blog
blackchaw says: အဲဒီ ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ကြီးက သဘက်ခါ ဆိုရောက်ပြီနော့…။
ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…။
Nyein Nyein says: ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးထမိပါတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက ကျောင်းသားတွေကိုလည်းအရမ်းလေးစားပါတယ်။ အခုလိုစုံစုံလင်လင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
Wow says: အစပိုင်းပဲဖတ်ပြီး ဆက်မဖတ်ရဲတော့လို့ အဆုံးအထိမဖတ်တော့ပါဘူး….
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲလိုအကြောင်းတွေ မရေးပါနဲ့တော့လားဟင်… ဘာတွေ အကျိုးရှိလာမှာမို့လို့လဲ…
မောင်ပေ says: ကြေးမုံဦးသောင်းရဲ့ “ဘီလူးတို့ ရွာ” ဘုတ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျို့ ။
စက်သေနတ်အသစ်တွေ ကို ထုတ်သုံးသွားခဲ့တာတဲ့
တစ်ချို့ ကျောင်းသားတွေဆိုရင် သုံးထပ်ဝရံတာမှာ သွားတိုက်နေရင်းတန်းလန်းနဲ့ အပစ်ခံပြီးပြီး ၊ သွားတိုက်တံလေးနဲ့ ပြုတ်ကျတာတဲ့ ။ အသေးစိတ်ကို ပြန်ဖတ်ပြီးမှ လာမန့် ဦးမယ်ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 321
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: သမိုင်းမှာ တကယ်ကို ယုတ်မာလွန်းခဲ့တဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသမိုင်းတွေကို ဒီဘက်ခေတ်လူတွေအောင် များများရေးသင့်ပါကြောင်း….Thanks..
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: သမိုင်းမှာ တကယ်ကို ယုတ်မာလွန်းခဲ့တဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသမိုင်းတွေကို ဒီဘက်ခေတ်လူတွေသိအောင် များများရေးသင့်ပါကြောင်း….Thanks…/ အခုလဲ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပြန်ဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ.။
ဇောက် ထိုး says: လေးလေးနက်နက် သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်သွားခဲ့ပါတယ်။
Shwe Tike Soe says: ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ..အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားတွေ တော် တော် သတ္တိရှိတာပဲနော်…သူတို.တွေရဲ. စိတ်ဓာတ်တွေကို အခု စာဖတ်ရင်းနဲ.ကို ခံစားလာရတယ်ဗျာ…
အခုလိုလေး history ပြန်လှန်ပေးတာ ကျေးဇူးဗျို…
ဇူလိုင် ၁၉ ကလည်းရောက်ခံနီးပြီလေ…………………..
Kyi Lwin says: အဲဒီအချိန်က ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်နဲ့ အလှမ်းမကွာတော့ လူတွေဟာ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလည်းသိတယ်။ လုပ်လည်း လုပ်ရဲတယ် ။လုပ်ရမယ့်တာဝန်နဲ့ သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ခု ကာလ လို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွာလှမ်းခဲ့တော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောဖို့တောင် နောက်တွန့်ကြောက်လန့် နေကြတယ်။ အဲလို ဖြစ်အောင်လည်း တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်ပြီးကတည်းက အာဏာရှင်နည်းစနစ်တွေနဲ့ တပည့်မွေး ဆရာမွေး အာဏာနဲ့ လက်နက်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက နည်း မှတ်လို့။
၀မ်းတွင်းရူး says: ဆရာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း စကားအတိုင်းဘဲ ဘယ်တော့မှ
Aoewaimaungkoyu says: သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်သွေးချွေးကိုစွန့်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှုးပြု ကျောင်းသားထုတရပ်လုံးကို ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်ပါ၏။
သမိုင်းဆိုတာထိုင်ပြောနေရုံမပြီး အတိတ်သမိုင်းကိုသင်ခဏ်းစာယူပြီး နောင်သမိုင်းကိုပြောင်မြောက်စွာရေးထိုးနိုင်ရန် ဆက်ခံသူကျောင်းသားလူငယ်ထုတို့ သတိမူစေချင်ပါသည်။
ခွပ်ဒေါင်းတို့ရဲ့သွေး ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မကျဲစေပါနဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3397
အရီးခင်လတ် says: အနှစ် ၅၀ တောင် ရှိခဲ့ပြီ။
ကျွန်မ ကောင်းကောင်း မသိခဲ့တဲ့ အချက်အလက် တစ်ချို့ အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်။
အဲဒီ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီး ဦးလေး နဲ့ အဒေါ်တွေ ခေတ် မှာ ကျောင်းထဲ မှာ “ကျောပေါက်ကြီး ဇာတ်လမ်း တွေ” ပေါ်ခဲ့သေးတယ်။
အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တွေ အားလုံး ကောင်းရာသုဂတိလား ခဲ့ကြပါစေ။
အခုအချိန်မှာတော့ အာဃာတ တွေ၊ အမုန်းတရား တွေ အားလုံးကို သမိုင်း စာမျက်နှာ အဖြစ်ဘဲ ထားခဲ့ စေချင်တော့တာပါဘဲ။
မဟုတ်ရင် ကြားမှာ မြေဇာပင် တွေ အများကြီး။
အမုန်းတွေ နဲ့ ဘဝ သစ် ကို ကောင်းအောင်လုပ်လို့ ရမယ်မထင်ပါဘူး။
အဲဒါတွေကို ထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည် အနာဂါတ်အသစ် အတွက် ဘဲ ကောင်းမွန် တိုးတက်အောင် ဦးတည် လုပ်ကြဖို့ သင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် က ကလေး တွေ ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဆိုတာ ရဲ့ အရသာ အလုံးစုံကို ပြန်ပေးဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
ဒါထက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည် မျက်နှာဖုံး တစ်ချို့ ရဲ့ ပန်းချီ တွေ ကြားထဲ မှာ လျှို့ဝှက် သင်္ကေတတွေ အများကြီး ပါခဲ့တယ်။
နောက် အဲဒီ စာအုပ်တွေကို ပြန်သိမ်းသွားခဲ့တယ်။
ကျွန်မ ဦးလေး ဆီမှာ ရှိခဲ့တယ်။
အခု တင်ထားတဲ့ မျက်မှာဖုံးမှာ အဲဒါတွေ ရော ပါလား မသိဘူး။
kai says: အခုသတင်းတွေအရတော့… ဗကသခေါင်းဆောင်တွေအကုန် လိုက်ဖမ်းနေတာပဲ.. အရင်ကတည်းက.. အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာ.. ထပ်ပြောမယ်..
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို.. အရင်နေရာမှာ ပြန်ဆောက်ပါ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3124
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: စာမျက်နှာဟောင်းဘဲပြန်လှန်ရမှာဘဲ
အကြံအဖန်လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အကောင်ထည်ဖော်ကတည်းက
အဲ့သည်တုန်းက မထောက်ခံခဲ့လို့ ယိုင်းအဘေခံခဲ့ရဘူးတဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပြီးတောင်အထင်ကြီးမိသေးတယ် ကွိကွိ
( မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးဟာ လူတစ်စုရဲ့
လှည့်ကွက်ထဲမှာ ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြောပါတယ် )
အမုန်း လုလင် says: ( မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးဟာ လူတစ်စုရဲ့
ကြောင်ကြီး says: ကမ္ဘာမကြေဘူး…..
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဆယာကြောင်ဂျီး
ခန္ဓာနောက်က တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ မလိုက်စေနဲ့